ကချင်ပြည်နယ်တွင် အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ကွင်းဆင်းလေ့လာ | ဧရာဝတီ
ကချင်ပြည်နယ်တွင် အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ကွင်းဆင်းလေ့လာ
ခင်ဦးသာ| December 18, 2012 | Hits:10,188
4 | | မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ် ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့တွင် ပြည်တွင်း ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည် (IDP) များကို တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Kachin Waves / Facebook)
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ကချင်ပြည်နယ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်သည် စစ်ပွဲများ အဆုံးသတ်ရေးနှင့် ဒုက္ခသည်များ ကူညီရေးအတွက် ယနေ့တွင် သွားရောက် လေ့လာလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်သည် ကချင်လူမှု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ကချင်ဒေသတွင်း စစ်ပွဲများ အဆုံးသတ်ရေးနှင့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ ကူညီကယ် ဆယ်ပေးရေး ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးရန် သွားနေချိန်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေပြီး ယနေ့နံနက်တွင် ကာမိုင်းရဲစခန်းကိုလည်း KIA က ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကာမိုင်းရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး ကျဆုံးပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် KIA က မိုးကောင်း ချောင်းကူး ဘေလီတံတားကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သူ ကချင်ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ မနန် တူးဂျာက “ဒီမနက်ပဲ ဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားပါတယ်၊ ဖားကန့်မှာ အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ ထုနေကြပြီလို့။ ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေက စစ်ပွဲတွေ မရပ်ကြလို့ပဲလေ။ ဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး စားပွဲဝိုင်းကို မြန်မြန်လုပ်သင့်တာပေါ့” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေရခြင်းသည် စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စု မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပင်လုံစာချုပ်ပါ အခြေခံအချက်များကို အစိုးရက အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပေးရန် လိုကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေးများ မရှိသည့်အတွက် ခွဲထွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖြင့် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်သားတို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေရကြောင်း အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးကို ရှင်းပြခဲ့သည်ဟု ဒေါက်တာ တူးဂျာက ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်တွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲများရပ်စဲရေးအတွက် အစိုးရ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ကချင်လွတ်မြာက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တို့အကြား ဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်ချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို သံအမတ်ကြီးက မေးမြန်းကြောင်း၊ ထို့အတူ KIA ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများရှိ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို ကူညီနိုင်ခြေ ရှိ မရှိ စသည့်ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုဆန်းအောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်သည် ဒေါက်တာ မနန် တူးဂျာ၊ ကချင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) မှ ဒေါ်ဘောက်ဂျာ၊ ကချင်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများမှ လူငယ်များနှင့် အသီးသီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဘာကြောင့် သံအမတ်က လာတွေ့တာလဲလို့ မေးတော့ ပြည်မက ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုချည်းပဲ အာရုံစိုက်နေတော့ တခြားလူမျိုးတွေကို အလေးမထားသလို ဖြစ်နေမှာစိုးလို့။ နောက်ပြီး စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေ၊ အစိုးရပိတ်ထားတဲ့အတွက် အကူအညီတွေကို ဘယ်နေရာကနေ ပေးလို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာကြည့်တာလို့ ဖြေပါတယ်” ဟု NDF ၏ ကချင်ပြည်နယ် တာဝန်ခံ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကချင် လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါ်န်က “သံအမတ်နဲ့အတူ စစ်သံမှူး၊ နိုင်ငံရေးအရာရှိ သုံးဦးပါပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ ဆိုတာကိုတော့ တိတိကျကျ မေးစမ်းပါတယ်။ သူ့အပေါ်အမြင်တွေကို လိုက်နားထောင်တာနဲ့ တူတယ်။ ဒေါက်တာ တူးဂျာကတော့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာ အဓိကကျတဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးကို ကျော်ပြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အာရုံစိုက်လွန်းတဲ့အကြောင်းကို ပြောတယ်။ ကျမကတော့ လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ် အခြေအနေ၊ သမိုင်းနောက်ခံတွေကို အစအဆုံးပြောပြတယ်။ သတင်းအချက် အလက်တွေ အတော်များများလည်း ပေးလိုက်နိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မစ္စတာ ဒဲရက် မစ်ချယ်သည် ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေး၊ လူမူရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံပြီး ယနေ့ညနေတွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
KIA နှင့် အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲများသည် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပိုမိုပြင်းထန်နေပြီး နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများ ရှိကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှု များကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် KIO တို့အကြား နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲတခုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးရန် ဦးအောင်မင်းက ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း KIA က မီဒီယာများကို ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ဖြေဆိုထားသည်။
ကချင်ထိုးစစ် မရပ်လျှင် အပစ်ရပ် ၁၀ ဖွဲ့ ဆွေးနွေးရေး အစီအစဉ်ကို ပြန်သုံးသပ်မည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Salai Lian December 19, 2012 - 4:24 am	We are eager to hear from the US Ambassador what he sees in Kachin State and what his evaluation is. I am so glad that he sees with his own eyes. Making the Kachins become refugees on their own land is eternal history of the so-called democratic government under the leadership of Thein Sein.